Mgbe ụmụaka na-egwu n'èzí - omume ziri ezi n'oge égbè eluigwe
Omume ziri ezi n'oge thunderstorms | mmụta
Kedu ka m ga-esi eme omume n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'oge égbè eluigwe?
Omume ziri ezi n'oge égbè eluigwe: Ọ dịghị mgbe ọ ga-abụ ihe kachasị elu
Àgwà n'oge égbè eluigwe na ugwu
Ajụjụ nwa nke nwa ọ bụla ma ọ bụ papa nwere ịza ajụjụ n'oge ịzụ ụmụ. Ìhè na égbè eluigwe bụ mmetụta ndị yiri nke égbè eluigwe.
Anyị niile na - enweta thunderstorms - ma wn'elu na-abịa àmụmà na égbè eluigwe?
M na-ekpe ekpere nkebi okwu a ka ọ bụrụ obere akwụkwọ iji mesighachi nwa m nwanyị ike, bụ onye na-enwekarị ụjọ mgbe enwere égbè eluigwe n'oge okpomọkụ.
A ghaghị ịmara omume kwesịrị ekwesị n'oge égbè eluigwe!
ma ebee ka igwe-oji na égbè eluigwe si? n'ezie? Igwe ọkụ abụghị ihe ọ bụla karịa mkpuchi eletriki. Ọnụ égbè eluigwe ahụ nwere ebili mmiri na-ebute ọkụ.
Ị na-anụrịrị àmụmà, nnyefe, dị ka égbè eluigwe. Ebee ka àmụmà na égbè eluigwe si? ga-abụ ihe dị ka: gịnị mere uhie na égbè eluigwe.
Oké ifufe na àmụmà na égbè eluigwe
N'oge okpomọkụ, anyanwụ na-ekuku ikuku mmiri dị nso n'ala. Igwe mmiri na-ekpo ọkụ na-ebili ka ha na-adị ọkụ ma na-adaba na gburugburu ebe obibi na-agba gburugburu ebe dị na mbara igwe. Nkewa ikpe a (oyi / ọkụ) na - ewuli elu eletrik, nke, ma ọ bụrụ na ọ na - etowanye ike, na ọkụ na timpani na opi - égbè eluigwe! - wepu.
Ebee ka àmụmà na égbè eluigwe si? Ya mere a ga-edozi nke a. Ha na-akpata esemokwu na elu elu. O doro anya na elekere eletrik a na-ebute otu ijeri volts. Ọ bụrụ na iwepụ ọkụ, okpomọkụ nke ruru ogo 30,000 nwere ike ime. Nke a na-ekpuchi ikuku, nke na-agbasawanye ngwa ngwa wee site na ebili mmiri.
Ịmata maka isiokwu a:
na-acha akwụkwọ osise na isiokwu banyere ihu igwe
Mgbe a jụrụ ya: Ebe igwe-oji na égbè eluigwe siYa mere, otu onye ga-ekwu na ha abụọ bụ ihe ịtụnanya nke iwepụ na iweghasị esemokwu na mbara igwe.
Omume ziri ezi n'oge égbè eluigwe n'eziokwu n'eziokwu mgbe ụfọdụ na-ekpebiri ndụ na ọnwụ. Karịsịa, ụmụaka ndị na-egwu ọtụtụ n'èzí ga-abụrịrị ndị isi iwu kachasị mkpa. Otutu mmiri na-emekarị ka ọ bụrụ ihe ijuanya, ọ bụrụgodị na a gwara ụmụaka ka ha laghachi n'ụlọ n'oge, ọ nwere ike ime na oké ifufe ahụ dị ngwa karịa ha nwere ike ime.
Otu esi eme omume n'ụzọ kwesịrị ekwesị mgbe égbè eluigwe ọ dị? N'ọnọdụ ọ bụla: jide nwayọọ. Nke a adịghị mfe maka ụmụaka nwere nchegbu. Ụkpụrụ ahụ nwere ike bụrụ ihe nkwado nye onwe gị iji na-eme omume n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'oge égbè eluigwe ma ghara ịgba ọsọ.
Mmiri na-egbukepụkarị na ihe kachasị elu dị na gburugburu ebe obibi ha. N'ihi ya, iwu kachasị mfe bụ obere. Ya adịla mgbe ọ ga-abụ ebe kachasị elu na mpaghara ahụ. N'elu n'èzí ọ dị oké mkpa iji zere osisi ndị dịpụrụ adịpụ, ogwe osisi, ogige ígwè, wdg.
Gwa ụmụ gị oge dị mma gbasara àgwà kwesịrị ekwesị n'oge oké ifufe
ezigbo Àgwà n'oge égbè eluigwe N'ebe a na-adịghị ahụ anya kwesịrị ịchọ ịchọ oghere na squat. E kwesịghị imetụ ala ahụ n'ofe buru ibu na ahụ, ụkwụ kwesịrị ijikọta ọnụ na squat ahụ, tinye ogwe aka n'akụkụ ụkwụ.
A na-enwu ọkụ nke na-akụ n'ala, ya bụ na ọ na-asọpụta ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala ị ga-akpọtụrụ ya.
Isi nke abụọ: zere mmiri! Mmiri na-emepụta ọkụ eletrik nke ọma. Na isi bụ mgbe kachasị elu mgbe igwu na ọdọ! N'ihi ya, ọ na-esi n'ọdọ mmiri ọdọ mmiri, ọdọ mmiri, iyi, wdg. Ụmụaka kwesịrị ịma na ha chọrọ ebe dị anya na mmiri niile. Nke ahụ bụ omume ziri ezi n'oge égbè eluigwe.
Aka n'aka eriri ụdọ ma chọọ ebe obibi n'etiti nkume ndị dị ala. N'oge mgbụsị akwụkwọ, ụmụaka ga-eweghachikwa kite ha, n'ihi na ha na-aghọ ngwa ngwa - ọ bụrụgodị na ifufe nke na-ebute oké ifufe ahụ ka na-adọrọ mmasị!
Omume ziri ezi n'oge égbè eluigwe n'oké ọhịa dị ike. Enwere otutu ọnọdụ ebe nchekwa maka ebe a. Ọzọ, legharịa anya n'ebe miri emi ma ọ bụ ebe ndị dị n'oké ọhịa na ịdọrọ ala, zere osisi buru ibu na n'ozuzu ha anaghị achọ ebe nchekwa n'okpuru osisi, ka mma ịhọrọ oke.
Nke na-agba agba oké ifufe
Short akụkọ maka ụmụaka - Oké égbè
Ịbanye na ndị na-eto eto | mmụta
Eczema na ụmụaka
Kwalite creativity na ụmụaka
Akwụkwọ ụmụaka - Gini mere ịgụ ji dị mkpa? | mmụta
Nyere, nwa m na-agha ụgha | mmụta